Hagaajinta muuqaalka codsiyada GTK + 3 iyo QT ee OpenBox | Laga soo bilaabo Linux
Hagaajinta muuqaalka codsiyada GTK + 3 iyo QT ee OpenBox
Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | Isticmaal FileLet
FurBox lagu beddeli karaa mawduucyada iyo matoorada GTK sidaa darteed daaqadaha iyo codsiyada waxay u muuqdaan kuwo aad u soo jiidasho leh isla markaana la jaan qaadaya desktop-ka. Nasiib darrose, wax ka beddelladan ha dalban GTK + 3 sida codsiyada cusub ee lagu soo daray GNOME 3 oo aan loogu talagalay codsiyada lagu soo saaray QT.
Codsiyadaan si ay sawir ugu yeeshaan sida ku cad desktop-ka ku saleysan OpenBox, waxaa lagama maarmaan ah in la sameeyo dhowr ka mid ah dejinta gacanta dheeraad ah.
1 Codsiyada GTK + 3
2 Codsiyada QT
Codsiyada GTK + 3
Codsiyada GTK + 3 si ay u adeegsadaan mowduuc ka raaxo badan ama la mid ah barnaamijyada kale ee GTK ee ku jira nidaamkeena, waxaa lagama maarmaan ah in la rakibo xirmooyinka caadiga ah ee librsvg iyo gnome-themes-standard.
Xusuusin: Xusuusnow in Buuggan loogu talagalay OpenBox on Arch Linux laakiin waad la qabsan kartaa qaybinta kale.
sudo pacman -S librsvg gnome-themes-standard
Marka xigta, samee feylka qaabeynta halka aad ku cayimayso dulucda ay adeegsanayaan barnaamijyada GTK + 3.
mkdir -p ~ / .config / gtk-3.0 /
nano ~ / .config / gtk-3.0 / settings.ini
Ku dhaji sadarradan soo socda, adigoo u beddelaya erayga THEME magaca mawduuca GTK + 3 ee aad rabto inaad isticmaasho.
[Dejinta] gtk-codsi-doorbid-mugdi-mawduuc = been ah
gtk-theme-name = MAWDUUCA
Waxaa jira mawduucyo kooban oo bixiya muuqaal la mid ah noocyada GTK + 3 iyo GTK + 2, iyaga waxaa ka mid ah kuwan soo socda:
Adwaita oo loogu talagalay GTK + 3 iyo Aldabra oo loogu talagalay GTK + 2
Newlooks ee GKT + 3 iyo Clearlooks ee GTK + 2
Xusuusin: xusuusnow inaad dejiso mawduuca GTK + 2 ee OpenBox isticmaali doono waxaad isticmaali kartaa arjiga LXAppearance.
Codsiyada QT waxaan u isticmaali karnaa arjiga QTConfig ee ku jira xirmooyinka QT 4.5 ee la rakibo markaan rakibno codsi ku saleysan QT.
Si aad u bilawdo, ka orod qtconfig saldhiga.
Markaad gasho daaqadda QT Configuration, dooro tab Muuqaalka. Halkaas waxaad awoodi doontaa inaad doorato ikhtiyaarrada lagama maarmaanka u ah inaad beddesho sawirka codsiyada ku saleysan QT ee lagu rakibay nidaamkaaga.
Fursadaha u baahan in wax laga beddelo waa kuwan soo socda:
Qaabka GUI: GTK +
Samee Palette: Waxaan u doorannaa midabada la rabo 3-D Raadka iyo Windows Background.
Qeybta hoose ee daaqada, waxaad ka arki kartaa muuqaal horudhac ah oo ku saabsan sida codsiyada ku saleysan QT ay u ilaalin doonaan isbadalada la sameeyay, markii aad ku qanacdo isbeddelada, dhagsii faylka faylka oo xulo xulashada Badbaadinta.
Tani waa ku filan tahay in dhammaan codsiyada lagu rakibay nidaamkaaga ay leeyihiin muuqaal la mid ah oo wacan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Isticmaal FileLet » Hagaajinta muuqaalka codsiyada GTK + 3 iyo QT ee OpenBox
Waxaan rabaa inaan wax ku darsado. Si isdhexgalka u dhexeeya sanduuqa furan iyo Qt uu u noqdo mid qumman, waa inaad hubisaa in maktabadda «libgnomeui» la rakibay. Dhibaatadaas ayaan kala kulmay Lubuntu iyo VLC waanan u xaliyay sidan. Guul!
Ku jawaab Andrex
Laakiin waa maxay mawduucyada gnome-themes-standard leeyihiin?
Ku jawaab Andres
Bash: Xaaladaha (haddii-markaa-kale)
Calligra, oo ah xafiiltan weyn Libreoffice